Low-Code kuvandudza mapuratifomu. Zvimwe zvakavhurwa sosi sarudzo | Linux Addicts
Low-Code kuvandudza mapuratifomu. Dzimwe sarudzo dzakavhurika
Iyo Low-Code yekuvandudza chikuva ndiyo inoshandisa graphical wizard kugadzira nekuvaka software pachinzvimbo chemaitiro echinyakare ekunyora mirairo inotevedzana uchishandisa mutauro wechirongwa.
Muchinyorwa chino tinoshandisa izwi rekuti Low-Code mupfungwa yakafara, riini Muchokwadi, kune marudzi maviri emapuratifomu:
Low-Code mapuratifomu anoda kunyorwa kwehuwandu hushoma hwekodhi kuunganidza zvikamu.
No-Code mapuratifomu haadi chero kodhi kugadzira kana kugadzirisa software.
Ngatitange nekujekesa izvozvo rudzi urwu rwepuratifomu haruna kunangana nemushandisi wepamba asi kune "Citizen developer»
Mugari anovandudza (Citizen developer) mushandisi wekambani anoda kuvandudza maapplication avo mukati, asi asina ruzivo rwekutanga rwehunyanzvi kana coding.
1 Mashandiro Akaderera-code Ekuvandudza Mapuratifomu Anoshanda
2 Vhura sosi maturusi ekuvaka maapplication ane mashoma kana asina coding
Mashandiro Akaderera-code Ekuvandudza Mapuratifomu Anoshanda
LVagadziri vanongofanira kuwana zvikamu mubrowser, dhonza uye uzvidonhedze uye simbisa hukama hunonzwisisika pakati pavo.
Vanobvumira kushandiswa kwekufananidza kwekuona panzvimbo yekunyora kwekodhi kuderedza nguva yekuvandudza.
Mushandisi anovaka chishandiso nekukweva uye kudonhedza zvinhu zvakafanogadzirwa.
Kuitwa kweiyo life cycle modhi inobvumira kuunzwa kwezvigadziriso kune application.
Kugadzira maapplication anoenderana nemakomputa edesktop uye nharembozha.
Kugadzikana kuri nyore kuwedzera kushandiswa kwechishandiso kubva kune prototype kusvika pakutumirwa kwayo mukambani yese.
Kunyangwe kuri kugadzirwa kwezvishandiso nevashandisi vega zvekushandisa kwavo kana kumasangano makuru, mabhenefiti emhando idzi dzekushandisa ndeaya:
Lower kudzidza curve pane chinyakare nzira.
Zvishandiso zviri nyore zvekusimudzira zvinosanganisira yakapusa yakabatanidzwa budiriro nharaunda inotsigira kudhonza uye kudonha, yakapfuma chikamu raibhurari, uye maturusi ekugadzirisa anotarisa mugadziri pane yekushandisa logic uye mharidzo.
Akavakirwa-mukati anodiwa zvivharo zvekuvaka: huchokwadi, data sosi manejimendi, mushandisi uye chitupa manejimendi, faira maneja uye kugadzirisa, uye maneja wekumisikidza.
Kuderera munguva dzebudiriro uye mari.
Vhura sosi maturusi ekuvaka maapplication ane mashoma kana asina coding
Ichi chishandiso, inowanikwa Windows, Linux uye Mac.
Vagadziri vanovimbisa kuwana kune ese masimba anodiwa gadzira yakaomesesa, yakasimba uye scalable makore mhinduro. Chirongwa ichi chinoshanda neakajairika dhatabhesi mhando uye inowanikwa kuburikidza ese akajairika mabhurawuza uye zvishandiso.
Chirongwa ichi chinosanganisa seti yeakavhurika sosi matekinoroji ekubata kushingirira, akapfuma mushandisi interface, chengetedzo, kufamba, mishumo, mabasa, zvirimo, nzvimbo uye nhare kubatanidza.
Iyi chikuva Yakaderera-code ine webhu-based edhita inotsigira akawanda data masosi kunze kwebhokisi. Yakanakira vashandisi venovice sezvo isingade yekutanga tekinoroji kana coding ruzivo. Inowanikwa mumashanduro matatu. Yemahara ine zvese zvinoshanda izvo mushandisi anogona kuisa pane yavo sevha, yakaganhurwa zvakare yemahara pamaseva epamutemo kana yakakwana inogarwawo pamaseva epamutemo e50 € pamwedzi.
Rimwe chikuva yakanangana nenharaunda yebhizinesi inotsvaga kubatsira vanogadzira uye vanoita sarudzo kuti gadzira zvikumbiro zvebhizinesi pazvinenge zvichidikanwa. Muchiitiko ichi vanotarisa kushandiswa kwemukati. Iyo ine zvese zvinodiwa kuti ubatanidze kumatafura, maonero, mafomu uye data masosi,
En nyaya iyi ndezve yakavhurika sosi yewebhu chishandiso chekutonga nekugadzira dhatabhesi. Zvinoda hapana pamberi coding ruzivo kana yepamusoro unyanzvi ruzivo. Iyo ine hushamwari interface inobvumidza iwe kugadzira uye kugadzirisa akawanda dhatabhesi, vashandisi, uye mapoka evashandisi. Inosanganisira kutsvaga uye kusefa mabasa uye kugona kupinza mifananidzo.
Ini ndanga ndichitsvaga yakavhurika sosi dzimwe nzira dzekugadzira Low-code application dzakanangana nemushandisi wemba, asi kusvika parizvino handina kukwanisa kuzviwana. Kana iwe uchiziva nezve chero, ndingazvifarira kana iwe ukandiudza mune yekutaura fomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Low-Code kuvandudza mapuratifomu. Dzimwe sarudzo dzakavhurika
yekutanga OS 6 inovandudza dhizaini yayo yezororo reKisimusi, pakati pezvimwe zvitsva zvaNovember
Bhadhara nechiso chako Tekinoroji mberi kana kuvanzika hope?